The Good Life Bhuku — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
"Kwemakore, Ndave kuita mimhanzi nezvimhingaidzo yedu nyika maonero uye pfungwa kuna Kristu – asi kune vagara zvisingakwaniswi mimhanzi, nekuti hakuna chete zvokuti unogona kutaura pane rwiyo,"Anodaro Trip. "The Album akapa vateereri Snapshots upenyu hwakanaka, uye bhuku achava sechimwe bhuku sei kurarama naro. Ndiri ndichinyengetera kuti bhuku rino richakubatsirai muverengi kuti apetuke kubva nenhema uye kurarama nenzira takasikwa kuti tirarame. "
Nokushandisa pachako uchapupu upenyu hwake, Trip rinoongorora nhema kuti vakaudzwa, uye ruchipa itsva, yemubhaibheri mufananidzo upenyu hwakanaka. Exploring vose upenyu kusanganisira mufaro, budiriro, uye nehunhu hwakanaka chiedza chechokwadi chaMwari The Good upenyu redefines kwezwi kwete kuraramira kufadza pachako asi kurarama nokutenda muna Mwari wakanaka.
"Upenyu hwakanaka haisi vanokwira kuna pamusoro chepamusoro manera, upenyu hwakanaka haisi upenyu hake chero basa,"Anodaro Trip. "Upenyu zvakanaka kurarama sync naMwari uye vachimbundirana zvose Anofanira kwatiri kupa muna Kristu."
No waachangoroora kuti yechiKristu mumhanzi Chiitiko, Trip kuti debut Album, Kana ivo Only Waiziva, rova zvitoro mazuva munyika mashoma pashure ake chikoro chesekondari. Gore iroro, Iye akaiswa anoratidzwa pamusoro Njiva Award-nominated, isingachinji klassiske "Jesu Muzik" pamwe chitaridzi naye Lecrae. Trip kuti sophomore Album,20/20, yakabudiswa muna 2008 uye ndivo kubudirira zvikuru: rokukoromorwa kupinda Billboard Top 200, richisvika #11 pamusoro Billboard Christian Albums chati uye kumhara pane #4 pamusoro Gospel chati. With rwake rwechitatu Studio Album, Between Two Worlds, Trip akabayira muunganidzwa pfungwa upenyu munyika rawa. Mafungiro iwayo resonated nevateereri sezvo B2W debuted pa #1 pamusoro yechiKristu uye Gospel Billboard machati, #5 pamusoro Hip Hop / Rap iTunes chati uye #9 pamusoro Top Albums iTunes chati. Album vagamuchirawo vaviri neNjiva nominations uye akatisiyira Award nokuda Best Gospel Rap / Hip Hop Album the Year.
Trip kuti tsva Album kusunungurwa, The Life Good debuted panguva #2 zvose pamusoro zvinonakisa uye Hip Hop iTunes machati apo garnering ari #3 nzvimbo pamusoro Billboard kuti Hip Hop chati, tasvika #17 pamusoro Top 200 Billboard chati uye akatora #1 slots pamusoro yechiKristu uye Gospel Billboard chati.
Trip akaita akafamba nyika achiita nezviuru vateereri. Pachiimbwa The Life Good, Trip pari pamusoro promotional munyika runobudirira uye achava kuripo Artist panguva dzakasiyana-siyana 2012 mitambo kusanganisira Spirit West Coast, Atlanta Fest uye Rock The Lakes, pakati vamwe.
About Moody Yevaparidzi
For kupfuura 115 makore, Moody Vaparidzi akabudisa akavimbika, , zvinhu zvokunyama kuti inotaurawo nyaya inokosha muupenyu. Vanoramba zvinodiwa pamusika inokura uye kuchinja pamwe nezvibereko chemhando yepamusoro, kuburikidza nemabhuku rakagara richidudzirwa kudhindwa, kuburikidza ekuteerera nemavhidhiyo zvinogadzirwa, uye ikozvino kuburikidza e-book yevashoma yemagetsi vaverengi. Kuti uwane mamwe mashoko, ndapota shanyira http://www.moodypublishers.com/.
About Reach Records uye ReachLife Ministries
Svika Records uye ReachLife Ministries vanoedza, "Pave musiyano uri pakati chokwadi yebhaibheri uye mumaguta akapoteredza." Umbwa mu 2003, Reach Records muKristu mumhanzi zvinyorwa chitaridzi yakatsaurirwa pakushandisa mumhanzi senzira yokusvika Urban munharaunda rutsigiro inzwi nzira. Nepo Reach Records anoshandisa nziyo kuzivisa chokwadi chebhaibheri, ReachLife Ministries ndehwokuti simba ushumiri vatungamiri vane mumhanzi uyu kuti kukura kereke dzomumaguta.
Kuti uwane mamwe mashoko uye mazita kuuya Inosvika Records uye ReachLife Ministries zviitiko, ndapota shanyira http://reachrecords.com. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro ReachLife tapota shanyirai http://reachlife.org/.
Sabahspsalm777 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:51 ndiri • pindura
Peace mukoma mhuri yedu yose anoonga artistry wako uye sei Ishe ari kushandisa iwe. No mhosva asi vamwe munharaunda vatendi vakanzwa runyerekupe kuti muri munhu “Mason” uye pasi illuminati. Handisi kuedza kuparadzira negativity, chete vangaonga kana iwe unogona kutaura izvi. Panzvimbo tiri muupenyu pane kudaro upombwe hwomudzimu kuitika nowenhema kutsausa vanhu, Ungaita ndapota mashoko kuitira vanhu vanogona kuziva chii chirikuita. Vamwe venyu chitaridzi vakaroorana sevari kuvheneka Masonic zviratidzo ipapo mavhidhiyo. Ndakauya Ishe pashure pemakore zvemashiripiti uye KUZIVA kuti zvakawanda zviri muchechi iri yaSatani. handina kuona kuti imi, asi isu tose tinofanira kuva wakasununguka nounyengeri. Ndapota tora hapana mhosva iyi vachibva kunzvimbo rudo uye hanya.
Sister muna Kristu
Michael kuri pachimedu • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:52 ndiri • pindura
Zvikuru! Unofanira kuuya kuna Moody Bible Institute – Spokane nekuti sununguro konzati! :)